Discord haisi yekutengesa. Nei iri nhau dzakanaka | Linux Vakapindwa muropa
Discord haisi yekutengesa. Nei iri nhau dzakanaka
Nepo yemahara software yemasangano ichivaraidza ivo mukati kucheka pasi kuna Richard Stallman, Tekinoroji hombe inoenderera ichiunganidza zviwanikwa kuti ive monopolies mune yega yega zvikamu umo musika wakakamurwa.
Vamwe vaongorori, kusanganisira magazini yeBritish The Economist, vanotaura kuti ndizvokusangana kwakadaro hakuwanikwi, uye kuti zvirokwazvo makambani makuru anokwikwidzana pamwe chete uye nezvimwe zvidiki. Asi, sezvingabvira, zvirinani mumaonero angu, ndiwo makwikwi euchapupu ekuchengetedza zviremera zviri pamutemo. Google ichagara nekutsvaga uye matekinoroji ewebhu, Amazon ine online kutengesa, Microsoft ine makambani masevhisi uye Apple ine zvigadzirwa zvetekinoroji zvekushandisa kwakawanda. Muzviitiko zvese, nevamwe vevamwe vachitora chidimbu chemusika chinotadzisa vezvematongerwo enyika kupindira.
1 Chii chinonzi Discord
2 Kutsvaga kwekutsvaga mari
3 Discord haisi yekutengesa
4 Nei iri nhau dzakanaka
Chii chinonzi Discord
Discord ndeye chikuva chinotendera vanhu kubatanidzwa mumapoka eruzhinji uye akazvimirira kuti vataurirane kuburikidza nerunyoro, izwi kana vhidhiyo yekutaura. Yakazvarwa kuti ishandiswe nevatambi, yaive nekukura kukuru panguva yedenda uye yakabatanidza vanhu vane zvimwe zvido.
Chinhu chinonakidza ndechekuti Zvinotaridza kunge zvaive zvinobatsira nebhizimusi modhi isina kana kushambadzira kana pakutengesa yakavanzika mushandisi data.
Yako yekubhadhara masevhisi; yakakosha emojis kana yepamusoro vhidhiyo resolution, yakamupa iye $ 130 mamirioni pagore. Izvi zvinotanga nemubhadharo wemwedzi wega we $ 4,99 kana muripo wepagore we $ 49,99. Uine mashanu (kana makumi mashanu emadhora akawanda) iwe unowana mukana kune maseva ari nani. Zvese izvi muchadenga revashandisi mamirioni zana.
Kutsvaga kwekutsvaga mari
Uye hazvisi izvo zvinoda rutsigiro rwekukurumidza rekambani hombe yehunyanzvi. Pakupera kwegore rapfuura, Greenoaks Capital uye Index Ventures zvakamubaya imwe $ 100 miriyoni. Panguva iyoyo kukosha kwekambani kwakagadzwa pamabhiriyoni manomwe emari imwe chete.
Microsoft yakapa mamwe mabhiriyoni matatu.
Pamusoro pekambani yaNadella, Discord yakaita hurukuro neAmazon uye Epic Mitambo. Sekureva kwebasa renhau rehupfumi Bloomberg, vaaibata navo yaive pfungwa yaDiscord.
Kune Microsoft ingadai yakave yakanaka kutora. Discord ingadai yakabatanidzwa sechikamu chemabasa ekutaurirana eXbox, chikuva chemitambo chekambani. Muchokwadi, avo vaaibata navo vaive naPhil Spencer, aive nebasa rebato iri.
Xbox inoita kunge yega chikamu chemusika wevashandisi vepamba umo Microsoft inoramba iine mukana wekutungamira, sezvo danda reGoogle Stadia richitadza kurarama zvinotarisirwa.
Discord haisi yekutengesa
Iko kungangoita kutenga hakuna kuenda zvakanyanyisa mushe nevashandisi veDiscord. Vazhinji vanoyeuka muchato wakakundikana weSkype neWindows. Vamwe vanotya Discord inozoshanduka voita izvo zvavanofunga kuti "yakafufutirwa, ngoro, uye zvinenge zvisingaite kuvhara software."
Vashandisi ava vanofanirwa kunge vakasunungurwa zvakanyanya kuti vazive chiie kwechinguvana kubva kuDiscord ivo vanofunga kuzvipira ivo pachavo kuvandudza yavo chikuva uye kutsvaga nzira nyowani dzekuita yavo mushandisi base inobatsira. Iyo nzira yekuwedzera capital, kana iwe uchida kudaro, ichave kuburikidza nekuburitswa neruzhinji kwezvikamu.
Zvakadaro, Microsoft yakawana nzira dzekushandisa mari. yakabhadhara 7500 bhiriyoni yekambani yemitambo Zenimax uye mabhiriyoni gumi nematanhatu ekuziva tekinoroji nyanzvi yekuziva Nuance. Nekusvika kwaBiden uye neshanduko dzezvematongerwo enyika, chipo chake cheTikTok chakange chisisiri chinokwezva kuChina vhidhiyo chikuva.
Nei iri nhau dzakanaka
Ndiri kuda kujekesa chimwe chinhu. Ini ndiri kure nekuve muvengi webhizinesi. Muchokwadi, kune vamwe vaverengi veLinux Vakapindwa muropa ini ndinofarira Microsoft.
Ini ndinoda makambani anokwikwidza, asi kwete monopolies kana oligopolies. Uye, lIzvo zvatiri kusangana zvinoita kunge mhedzisiro yemuchina weYalta musangano umo makambani makuru anopatsanura musika nenzira imwechete iyo masimba akapatsanura nzvimbo dzesimba repashure pehondo.
Saka Discord inoramba yakazvimirira uye inogona kubatsira ipfungwa yakanaka. Isu tatoona zvakaitwa neBM neCentOS uye Oracle neOpenOffice, Java uye OpenSolaris.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Discord haisi yekutengesa. Nei iri nhau dzakanaka
Zvirinani Discord haisi Disqus, ipuratifomu yakapararira yekupindura nehurombo AI ye otomatiki moderation iyo inoshanda zvakada kufanana kungori pasi pegumi uye, zvishoma nezvishoma, kunyora mazwi kana mapikicha ane zvine hungwaru kunge spam.